Inbound Brew: Gbaa ahia nke Inbound Marketing Strategy na WordPress | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 4, 2016 Douglas Karr
Ọnụ ọgụgụ nke ihe ngwọta na mgbagwoju anya nke ndị mmekọ agbakwunyere na-agbatị WordPress dị ịtụnanya. Inbound Brew bụ ahia dijitalụ zuru oke, mmepe weebụ, na ụlọ ọrụ mmepe ngwanrọ, nke nyeere obere ụlọ ọrụ aka iji ahịa ọdịnaya na-eme ka mmekọrịta na ndu. Ha ebipụtala ugbu a inbound ahịa ngwa mgbakwunye nke na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa iji mee nke a - site na WordPress!
Ihe mgbakwunye ahụ nwere ọtụtụ atụmatụ na-ahazi ọdịnaya ọdịnaya gị na mbọ ị na-agba n’ahịa, gụnyere:
-edu ndú Ọgbọ - mepụta ụdị omenala, ibe ọdịda, bọtịnụ CTA, jikwaa ndị na-eduga, ma zaghachi ozi ịntanetị HTML.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - mepụta ma jikwaa isiokwu, jikwaa redirects, bipụta faịlụ robots.txt gị, debe ihe saịtị XML, ma jikwaa data nchịkọta meta nke Google.
Mbipụta Social Media - Na-akpaghị aka na mgbasa ozi mmekọrịta (Push na Facebook, LinkedIn, na Twitter) ma bipụta snippet bara ụba meta data maka Facebook na Twitter.
Inbound Brew ga-azọpụta gị oge ma mee ka ahịa mbata gị dị mfe (oge ụfọdụ a na-akpọ ahịa ọdịnaya ma ọ bụ ahịa ikike). Nbanye ahịa na-enye gị ohere ịmepụta ọdịnaya dị mkpa maka ndị dị mkpa. Creatmepụta ọdịnaya bara uru na nsonaazụ ndị ahịa, njupụta ahịa, uto na ikike ngalaba, na ọgbọ ọgbọ.
Budata WordPress ngwa mgbakwunye
Tags: inbound ime biyainbound ime biya gị n'ụlọngainbound marketinginbound ahịa ngwa mgbakwunyewordpress ctaụdị WordPressemail WordPress html ozi ịntanetịWordPress inbound ahịawordpress ndu ọgbọwordpress ndu managementwordpress pluginwordpress ọgaranya snippetsWordPress robots.txtatụmatụ WordPressokwu mkpokọtamap saịtịwordPress sitemap xmlwordpress social media ebipụtawordpress xml saịtị saịtị